5 Koorsooyinka internetka ee loogu talagalay Cadastre - aad u xiiso badan - Geofumadas
5 Koorsooyinka internetka ee loogu talagalay Cadastre - aad u xiiso badan
Oktoobar, 2015 cadastre, Baridda CAD / GIS
Waxay ku qanacsan tahay in aanu ku dhawaaqeyno in Machadka Lincoln ee Siyaasadda Dhulka uu qabanayo hawlo waxbarasho oo kala duwan oo ku yaal Latin America, oo ay ku jiraan koorsooyinka fogaanta internetka.
Munaasabaddan waxa uu ku dhawaaqay horumarinta cusub ee koorsooyinka la bixin doono laga bilaabo 2 ilaa 18 November ee 2015.
Xidhiidhada hoos ku qoran waxay keenaan goobaha codsiga. Halkaas waxaad ka heli doontaa barnaamijyada koorsooyinka kuwaas oo ujeedooyinka, habka shaqada, content iyo taariikhda hawlaha, macallimiinta, iyo sidoo kale shuruudaha codsiga iyo ka qaybgalka ayaa lagu sharaxay. Xilliga kama dambaysta ah ee la codsanayo waxay xireysaa 21 ee Oktoobar ee 2015.
Cusbooneysiinta Kadastral: Doorashooyinka iyo khibradaha
Waxay raadineysaa in ay ka wada xaajoodaan fursado fudud (farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba meel kasta oo degmada ah) si loo hagaajiyo tayada xogta ku jirta caleemaha, asalka dhabta ah.
Waxtarka ururinta ee canshuurta hantida: Sidee baaxadda saldhigga saldhigga canshuurta iyo naqshadaynta alaabta loo saameeyo?
Koorsadan waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo falanqeynta waxyaabaha kale ee loo adeegsado cidda ka mas'uulka ah maamulka canshuurtu, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo waxqabadka iyo waxqabadka waxtarka.
Sharciyada ciidda iyo guryaha: Xiriirka iyo qalabka
Koorsadu waxay soo jeedineysaa wadahadalka dhibaatada guryaha ee laba qaybood: dhul iyo guryo, iyadoo la falanqeynayo saamaynta ay soo saareen qaababka kala duwan ee maalgelinta guryaha ee suuqa dhulka.
Qalabaynta qalabka qorshaynta territoriska ee magaalooyinka yaryar
Koorsadani waxay ujeedadeedu tahay inay soo bandhigto oo ka shaqeyso khaasatan qeexaya magaalooyinka yaryar iyo nidaamyada maareynta magaalooyinka, si loo aqoonsado qalabka ugu habboon ee lagu qeexayo siyaasadaha dhulka.
Cusbooneysiinta qiimeynta hantida magaalooyinka ee magaalooyinka: Istaraatijiyadaha iyo hababka loo fulin lahaa guul
Kala hadal xeelado iyo farsamooyin cusub, falanqaynta waayo-aragnimada guuleysiga ee qiimaha lagu cusbooneysiinayo geedi socodka Latin America
Post Previous" Hore III Isdhaafsiga Khibradaha Cadastre, Diiwaangelinta iyo Dhul Kireynta - Aragtida Koowaad
Post Next BIM - isbeddelka aan laga noqon karin ee CADNext »
4 Jawaabo "5 koorsooyinka khadka tooska ah ee Cadastre - aad u xiiso badan"
Julio Lopez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa tababarka koowaad
Waad ku mahadsan tahay waxtarka, waxaan raadinayey macluumaad tan.
Paula andrea waxay xooga saartey Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan ,,, sideen isku diiwaan geliyaa ...
RUBEN CASTRO LOBO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka shaqeeyaa aagagga la xiriira koorsooyinka la soo bandhigay,
Sideen uga qeybqaadan karaa, isdiiwaangalinta